Himalaya Dainik » रोकिएन असारे विकास, बालुवामा पानी हाले सरह भयो बजेट !
रोकिएन असारे विकास, बालुवामा पानी हाले सरह भयो बजेट !
काठमाडौँ, १९ असार -पूर्वाधार विकासका काम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनानामा हुने क्रम रोकिएको छैन । तीनै तहका सरकारको बजेट पारित अघिल्लो वर्षको असारमै हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विनियोजित बजेट तह लगाउने उद्देश्यले अन्तिम समयमा काम हुँदा गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ ।
भित्री कच्ची सडकमा मुसलधारे वर्षाका बीच काम हुँदा बाटो हिलोले हिँड्न नसकिने, पैदल यात्री एवं सवारी वाहक चिप्लिएर लडेर घाइते हुने लगायत समस्या रहेको स्थानीयवासी श्रीराम सापकोटाले बताउनुभयो । निर्माण स्थलमा सूचना पाटी समेत नदेखिँदा कति सडकमा के काम गर्न लागिएको भन्ने थाहा नभएको उहाँले सुनाउनुभयो । सडक निर्माणका क्रममा सिमेन्टको मात्रा समेत कम प्रयोग भएको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
स्थानीयवासीले गुणस्तरीयता कायम हुनुप¥यो भनी राखेको माग पनि निर्माण व्यवसायीले सुनेका छैनन् । नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा वाग्मती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयको ठेक्कामा काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । असारे झरीमा ग्राभेल नहाल्न नगरपालिकाले समेत अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालबाट दरभाउ नआई बोलपत्र नहुने, असोजसम्ममा मात्र दरभाउ आउने, त्यसपछि टेण्डर गर्दा काम गर्ने समय असारमै पुग्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसमा सुधारका लागि प्रशासन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत अनुरोध गरिएको नगर प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत ठेक्का भई प्लम्ब वाल लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको इञ्जिनीयर सुजन थापाले बताउनुभयो । त्यही सडकको मूलपानी प्लटिङतिरको भागमा नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाको काममा भने विभिन्न किसिमका समस्या आएको सुनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यो सडकका विषयमा स्थानीयवासीले बिरोध समेत गरिरहेका छन् । कार्यालयले गरेको भागमा भने सूचना पाटी राखिएको उहाँको भनाइ छ । त्यस क्षेत्रमा रु एक करोडको लागतमा ५८८ घनमिटरको वाल निर्माण भएको जनाइएको छ ।
नगरपालिकाको वडा नं.–५ को एउटै सडकमा एकातिर पूर्वाधार विकास कार्यालय र अर्कोतिर नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । नगर प्रमुख थापा पनि त्यस क्षेत्रमा नगरपालिकाको योजना समेत सञ्चालनमा रहेको स्वीकार्नुहुन्छ । वर्षामा ग्राभेल भने नहाल्ने उहाँको भनाई छ ।(रासस)
प्रकाशित मिति १९ असार २०७७, शुक्रबार १०:०८
पछिल्लो अवस्था बुझ्न सेना प्रमुखसहित भारत-चीन विवाददित भूमि लद्दाख पुगे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
बास्कोटी खोलामा बाढी, कैलालीका ३७ घर डुबानमा
ओली-प्रचण्ड छलफल : एकताको मर्म अनुसार अघि बढ्ने समझदारी
यि कुख्यात अपराधिले गरे पक्राउ गर्न आएका ८ प्रहरीको ह’त्या
सलह किरा रोकथाम गर्न नेपालमै बनेको ड्रोनको सफल परीक्षण
भारतिय टिभि सिरियलकी अभिनेत्री नव्या स्वामीलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि
काठमाडौँसहित देशका ठूला शहरबाट आउनेलाई काभ्रेमा कडाई !